အောက်တိုဘာလ အတွက် ကြိုတင်ဆုရသွားသူ ကျွန်တော် | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Copy/Paste » အောက်တိုဘာလ အတွက် ကြိုတင်ဆုရသွားသူ ကျွန်တော်
အောက်တိုဘာလ အတွက် ကြိုတင်ဆုရသွားသူ ကျွန်တော်
မန်းဂေဇက်ချစ်သူများစာပေဆုအောက်တိုဘာအတွက်ကို မနေ့က တိုးတိုးတိတ်တိတ် ကြိတ်ရွေးပြီး စောစောစီးစီး ပဲ အဖြေထွက်လာတယ် ။ နောက် ပိုစ့်တွေကိုလဲမရွေးတော့ဘူးတဲ့ ဘာလို့လဲဆိုတော့ ကျွန်တော့်ရဲ့ ပိုစ့် က အရမ်းကောင်းနေလို့ ပြိုင်ဘက်မရှိဘဲစောစောစီးစီးကြိုပေးထားတာဆိုပြီး ဖုန်းဆက်အကြောင်းကြားလာပါတယ်။ နောက်ပြီးရွာထဲကနာမည်အလိုလိုကြီးပြီးသား ပုဂိုလ်ကြော် တွေလဲ သူ့ဘာသာသူတိုးတိုးတိတ်တိတ် အဲဒီပွဲကိုတက်ရောက်လာပါတယ်။ ပွဲကိုတော့ အမြင့်ဆုံးဖြစ်အောင်ပြုလုပ်မယ်ဆိုပြီး sakura tower အထပ်နှစ်ဆယ်က sky bristo မှာလုပ်ပါတယ် ရန်ကုန်မှာတော့ သူထက်မြင့်တဲ့ဆိုင်မရှိတော့လို့ အဲဒီမှာပဲလုပ်စေချင်တယ်ဆိုပြီး သူကြီးကိုတိုင်က လှမ်းပြီးတောင်းဆိုထားတာပါ။
ဦးဦး ပါလေရာ၊ ကိုဘလက်ချော၊ မပဒုမ္မာ၊ ကိုကြီးမိုက်၊ ကိုပေါက်(မန်း)၊ မမ၊ ဝေေ၀၊ ကိုထူးဆန်း၊
အရီးခင်လတ်၊ Fatty Cat နဲ့ Shwe Tike Soe တို့က
ကျွန်တော်ရဲ့ ဘယ်လိုအရေးအသားတွေကြောင့် ဘယ်လိုပေးဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်ဆိုတာ အာဇဝန်း ရွှင်ရွှင်နဲ့ပြောကြပါတယ်။ ဆုကိုတော့ ဒီတစ်ခေါက် သူကြီးကဟိုကနေ့ ပို့ပေးလိုက်တာတဲ့ တန်ဖိုးအရမ်းကြီးလို့ custom မတွေ့အောင်ခိုးပြီးသယ်လာရတယ်ဆိုပြီး ကျွန်တော့်ကိုလက်ဆွဲသေတ်တာ အနက်လေးတစ်ခုကို ကိုကြောင်ကြီးက လာပေးပါတယ် သူတို့လဲဘာမှန်းမသိဘူးတဲ့ တစ်ချက်လောက်အားလုံးမြင်အောင်ဖွင့်ပြဘာလို့ ဆိုတယ် အဲဒါနဲ့ ကျွန်တော်လဲ အားရဝမ်းသာပေါ့ဗျာ သူကြီးဟိုကနေခက်ခက်ခဲခဲနဲ့ ပို့လိုက်ရတဲ့ဆုဆိုပြီး အားလုံးကိုကြည့်ပေတော့ဆိုပြီး သူတို့ဖက်လှည့်ပြီး ဖွင့်ပြလိုက်ပါရော။
ဟာ………..ဟင်…………ဟို……အားလုံးမျက်လုံးပြူးသွားတယ် ပြေးပြီ အကုန်ထွက်ပြေးကြပြီ ဘာဒွေဖြစ်ကုန်တာလဲဟ ကိုကြောင်ကြီးဆို သူ့ကိုလုံးကြီးနဲ့ Elevator ကနေမဆင်းပဲ လှေကားကနေဆင်းပြေးသွားတာမြန်မှမြန် မျက်စိတမှိတ်အတွင်းအောက်ရောက်သွားပြီ
အရီးခင်လတ်၊ နဲ့ Shwe Tike Soe တို့ကိုအောက်ကနေပြီး သူ့ ကိုယ်လုံးကြီးပေါ်ခုန်ချလိုက်ဆိုပြီး ဝမ်းလျားမှောက်ပေးတယ်။
ဟ…..ဘာတွေဖြစ်ကုန်တာလဲ ပြေးတဲ့သူကပြေးခုန်ချတဲ့သူတွေကခုန်ချနဲ့ဆိုတော့ ကျွန်တော်ခေါင်းစားသွားတယ် ကျွန်တော်ဆုရတဲ့ လက်ဆွဲ သေတာ အနက်ကလေးကိုကျွန်တော်ဘက်ကိုလှည့်ကြည့်ုလိုက်တယ် အော်..ဆုတံဆိပ် ဒိုင်းလေးပါ …..အမ်…သေချာထပ်ကြည့်လိုက်တယ် အလယ်မှာကျွန်တော့်နာမည်နဲ့စာတန်းတစ်ခု SAKURA TOWER တာဝါအား အသေခံ ဗုံးခွဲသွားသော Thu Wai အား မန်းဂေဇက် အဖွင့်ဝင်များကိုယ်စား ထာဝစဉ်လေးစားလျှက် တဲ့။
အား…………….သေပြီ…..သေချာကြည့်လိုက်တော့ ပေါက်ဖို့တစ်မိနစ်တောင်မလိုတော့တဲ့ချိန်ကိုက်ဗုံးကို အလယ်မှာ ထားပြီး ဘေးမှာ လက်ပစ်ဗုံးအလုံးသုံးဆယ်နဲ့ စီထားတာ ကျွန်တော်က ဆုတံဆိပ်မှတ်နေတာ သွားပြီ။။။။။ ကျွန်တော် ထိုးကြွေးခံလိုက်ရတာ။ ကျွန်တော် လွှင့်ပစ်လိုက်တယ် ကြောက်အားလန့်အားနဲ့ပြတင်းပေါက်ကနေ အောက်မှာ ကိုကြောင်ဝတုတ် ဝမ်းလျားမှောက်ပေးထားတဲ့ကိုယ်ပေါ်ကိုခုန်ချလိုက်တယ်။ အထပ်နှစ်ဆယ်ပေါ်ကခုန်ချရတာ World trade Center ပေါ်က ခုန်ချလိုက်ရသလိုပါပဲ အသည်းအေးလိုက်တာ။ အောက်မှာ ကိုကြောင်ဝတုတ်ရဲ့ ကိုယ်လုံးအကြီးကြီးကိုမြင်နေရပြီ။ ဟာ……သွားပြီ သူ့ကိုလဲ ကားတစ်စီးက ပွတ်ဆွဲသွားတာ သူနေရာရွေ့သွားပြီ…ဟာ..ငါသေတော့မှာပါလား အောက်မှာ ပလက်ဖောင်း စောင်းနဲ့ မျက်နှာနဲ့ကတည့်တည့်ကြီးဖြစ်နေပြီ ကျွန်တော်မျက်စိမှိတ်ထားလိုက်ပြီး ကိုယ့်ကိုယ်ကို သရဏံဂုံတင်ထားလိုက်ပါတယ်။
ဟဲ့ဘယ်လိုဖြစ်နေတာလဲ ကျွန်တော်မိန်းမထအော်တဲ့အသံ ကျွန်တော့်ဘေးလာကပ်အိပ်နေတဲ့ တယ်ရီယာ ချီဇူး ခွေးလေးကိုလဲ ကျွန်တော် လွှင့်ပစ်လိုက်တာ ဒေါင့်မှာခွေခွေလေး တအီအီနဲ့အော်လို့ ခြင်ထောင်ကြိုးတွေလဲပြတ်ပြီး ကျွန်တော်လဲ ကုတင်အောက်မှာခွေခွေလေး မိန်းမက အော်ပါလေရော ဟဲ့ဘာတွေဖြစ်နေလို့ ဒီလောက်ကုတင်အကျယ်ကြီးပေါ်ကပြုတ်ကျရတာလဲ ဆိုပြီးပြောတာပေါ့ ကျွန်တော်ရေတစ်ခွက်အရင်ထသောက်လိုက်တယ် အိမ်မက်ထဲမှာ မိန်းမကို ကားအကြီးကြီးကဝင်တိုက်တာ ယောက်ျားက ဒိုင်ဗင်ပစ်ပြီးတွန်းထုတ်လိုက်လို့ဟ မိန်းမမျက်နှာမှာ နည်းနည်းပြုံးယောင်သန်းသွားတယ် ကဲကဲ အိပ်ပျော်အောင်ပြန်အိပ်လိုက်ယောက်ျား မိန်းမကျောကုန်းလေးပွတ်ပေးမယ်
ဟူးအခုမှပဲ သက်ပြင်းချနိုင်တော့တယ် အော်ငါလဲ အိမ်မက်ထဲမှာတောင်မန်းဂေဇက်ကို မက်နေတယ်လို့တွေးရင်းပြန်အိပ်လိုက်တော့တယ်။
ဒီထဲမှာ နာမည်ပါတဲ့သူတွေ ဟာသအမြင်နဲ့ပဲ မြင်ပေးကြပါခင်ည
အော်..သူကြီးရဲ့ စေတနာတွေ… အိပ်မက်ထဲမှာ ပြောပါတယ်…
မိန်းမက ကျောပြင်ကို ဗျောဆင်တဲ့ ဆု ထပ်မပေးလိုက်လို့ 
ကို Thu Wai ချင့် … နောက်တခါ အိပ်မက်မမက်ခင် ကျွန်မကို ကြိုပြောပါနော် .. ဆာကူရာတာဝါ ရောက်တဲ့အခါ .. လက်ချောင်လေး လူကြုံ ပါးလိုက်ချင်လို့ ……….. ဟိုမျက်မှန်နဲ့ လူဂျီးလေ … မျက်ကပ်မှန်တပ်မယ်ဆိုလို့ … ကြိုးမပါတာလေး ၀ယ်ပေးထားတယ် ……. ခွိ ခွိ
ကိုThu Waiရေ .. ရွာထဲမှာ မိန်းမချိကြောင်း ချပြရသလားဟင် ….အဲ့ဒါဝှက်ဖဲဗျ …
ဦးကြောင်တို့လို … ရုပ်တည်နဲ့လူပျိုလှည့်ပြီး .. ရွာလည်ထွက်မရတော့ဘူး .. ဟိဟိ … :harr:
ခိခိ………… ကို Thu Wai ရပါစေဗျားးးးးးးးးး))))
ဘယ်သူအရင် ခုန်ချမလဲ vote ပေးနေလို့ ဘယ်သှုမှ ခုန်မချလိုက်ရတာ မသိလိုက်ဘဲ ကိုး….. :hee:
ကိုThu Wai ရေ ဒီပိုစ့်ဖတ်ပြီး အရမ်းအော်ရီလိုက်မိတယ်………..ဟားးးးးးးးးးးးးးးးးးးးး။
ဟာသအရေးကောင်းတဲ့ ပိုစ့်ပိုင်ရှင် အောက်တိုဘာအတွက် ဆုကိုတကယ်ရယူနိုင်ပါစေလို့..။
သုဝေချင်းအတူတူ ချစ်သုဝေလေးကျရင် ဟုတ်တုတ်တုတ်… အခုတော့ဗျာ…
အိမ်မက်ထဲမှာ မိန်းမကို ကားအကြီးကြီးကဝင်တိုက်တာ ယောက်ျားက ဒိုင်ဗင်ပစ်ပြီးတွန်းထုတ်လိုက်လို့ဟ
အူးလေးရေ သေချာအောင် ၂ခေါက်ဖတ်ကြည့်တယ်
သူတို့ ၂ယောက်က သပ်သပ်စီပါနော မတူပါဘူး ….
(ဟဲ့ဘယ်လိုဖြစ်နေတာလဲ ကျွန်တော်မိန်းမထအော်တဲ့အသံ ကျွန်တော့်ဘေးလာကပ်အိပ်နေတဲ့ တယ်ရီယာ ချီဇူး ခွေးလေးကိုလဲ ကျွန်တော် လွှင့်ပစ်လိုက်တာ ဒေါင့်မှာခွေခွေလေး တအီအီနဲ့အော်လို့ ခြင်ထောင်ကြိုးတွေလဲပြတ်ပြီး ကျွန်တော်လဲ ကုတင်အောက်မှာခွေခွေလေး)
ဘေးမှာအိပ်နေတဲ့ မိန်းမကိုတွန်းချမိပြီး၊ မိန်းမကိုယ်၀၀ကြီးပေါ်
(မိန်းမမျက်နှာမှာ နည်းနည်းပြုံးယောင်သန်းသွားတယ် ကဲကဲ အိပ်ပျော်အောင်ပြန်အိပ်လိုက်ယောက်ျား မိန်းမကျောကုန်းလေးပွတ်ပေးမယ်) ဆိုတာလည်းပြောင်းသွားမယ်ထင်တယ်နော်။
မလုပ်ပါနဲ့ဂျာ မိန်းမက ပိန်သေးသေးလေး သူ့ကိုယ်ပေါ်ခုန်ချရင် ကျွန်တော်အရိုးဆူးမှာပေါ့ ကိုယ့်ဘာသာ ကြမ်းပေါ်ပြုတ်ကျတာပဲကောင်းပါတယ်
အမလေးဟဲ့ အိမ်မက်များတောင် မက်သကိုး… ဒါနဲ. ခြင်ထောင်ကြိုးက ဘာကိစ္ဏပျက်တာလဲ အေ… အိမ်မက်မက်တာနဲ.ပဲ ခြင်ထောင်ကြိုးပြတ်တာ မဖြစ်နိုင်ပေါင်အေ……
သင့်ခ် သင့်ခ် သင့်ခ် အင်းးးးးးး တစ်ခုခုတော့ တစ်ခုခုပဲ.. သင့်ခ် သင့်ခ် သင့်ခ် ခိခိခိ
(အိမ်မက်ထဲမှာ မိန်းမကို ကားအကြီးကြီးကဝင်တိုက်တာ ယောက်ျားက ဒိုင်ဗင်ပစ်ပြီးတွန်းထုတ်လိုက်လို့)
အရှောင်အတိမ်း ဂျက်စီဂျိန်းကတောင် ဆရာခေါ်လောက်တယ်။ :harr:
ဒါ့ထက် ဒီရွာသားပီသတဲ့ အချက်လေးတစ်ချက် အမှတ်တမဲ့ မြင်လိုက်မိတယ်။
သဂျီးကို အကောင်းမမြင်တာချင်း တူနေလို့ :harr:
အလျှောက်ကောင်းတော့ အထောင်းသက်သာဆိုတာ Thu Wai ဆီက ဆင်းသက်လာတာဖြစ်မယ်။
ရွာထဲမှာ ဗီလ်ိန်နေရာဆို သဂျီးကိုချည်း သတိရတတ်တာ ဘာ့ကြောင့်မှန်းမသိ။ :harr:
ဗျို့  အန်တီမမရေ
ကျနော့ ကိုစောင်းပြောနေတာလားဂျာ ဟဲဟဲ
မနေ့ က ကတည်းကဖတ်ပြီးဟားနေတာ
ကွန်မကောင်းလို့မန့်မရဖြစ်နေတာဗျို့ 
ဒီပို့ စ်ကိုဖတ်ပြီးတော့ တော်တော်လေးရယ်လိုက်ရတယ်။ စိတ်ညစ်တဲ့အချိန်ဖတ်သင့်တဲ့ စာတစ်ပုဒ်ပါပဲ